WAA MAXAY SABABTA BERRIGA OO MIDBA MIDKA KALE KU DHUFANAYO, BAALDANA KU BUUFIN DHIIGGA - BEERAHA DIGAAGA
Sababaha sababta bareenta midba midka kale isbeddel
Guryo badan oo digaag ah ayaa la kulmay xaalad ah dhulbeereedku waxay bilaabaan inay muujiyaan gardarrada aan caadiga ahayn iyo xayiraad ama xitaa qaniinto midba midka kale. Inta badan ma ahan, shakhsiyaadka daciifka ah ee aan iska difaaci karin naftooda khatarta ah weerarradan. Aan eegno sababaha suurtogalka ah ee dabeecaddaan iyo sidii loo ogaan lahaa sida loola qabsado waxyaalahan oo kale.
Waa maxay sababta berriga oo kale midba midka kale
Mid ka mid ah sababaha geeseeya qarxa qaraabadooda, waxaa laga yaabaa inaysan jirin daaqsasho lacag la'aan ah. Inta lagu guda jiro socodka, shimbiraha ayaa si joogto ah u raadinaya waxa cunaya - laga bilaabo cawska ilaa cayayaanka, iyo maqnaanshaha daaqa waxaa loo qaadaa sida deriska ugu dhow. Waxay sidoo kale isku marin karaan cunnooyinka aan dheellitirnayn, taas oo ah la'aanta borotiin la'aan.
Sida loo xalliyo dhibaatadan:
u diyaargaroobida digaaga ee shimbiraha xilliga diiran;
waxaa ka mid ah cuntada shimbiraha, gaar ahaan chicks, ukunta la kariyey, jiiska iyo ilaha kale ee protein;
kudhee caleemo caleemo, rucubo ah cagaar ama dhar alaab ah oo guriga ka mid ah si goslings ay u xoqin karaan;
si loo daaweeyo shimbirta qashinka ah ee cawska bjørk, taas oo cabsiin doonta urka iyo, iyada oo ay ugu mahadcelinayso guryaha hudheelka, waxay gacan ka geysan doontaa bogsashada nabarrada.
Marka la hayo berriga waa mid aad muhiim u ah in la raaco mabaadii'da cunto isku dheeli tiran. Ka akhri sida loo sameeyo cunto lagu gawraco guriga, gaar ahaan xilliga jiilaalka.
Midba midka kale qaniiya ilaa dhiig
Tani waa dhibaato aad u daran, taas oo horseedi karta xitaa xashiishadda. Sida caadiga ah, sababta ugu weyn ee dabeecadani waa xajmiga yar ee guriga ama qalabka shimbirta. Sida dhammaan waxyaabaha nool, baaskiilku wuxuu bilaabaa inuu u dagaalamo meel bannaan oo degaan ah, oo marba meel ku dhow dhulka, way qirtaan qaraabadooda daciifka ah. Intaa waxa dheer, habdhaqankani wuxuu noqon karaa natiijo dheer oo aan ku filneyn quudin ama quudin aan habooneyn oo shimbiraha leh iyadoo la isticmaalayo badeeco soy ah ama qudaar xoolaad ah.
Sidoo kale, dib-u-celinta shakhsiyaadka cusub, heerkul sarreeya ama hoos u dhicii, iyada oo la'aanta iftiinka habeenkii ee guriga digaaga, qoyaan yar (ka yar 50%), jiritaanka buuqa (ka sarreeya 60 dB) ama qolofta qolalka waxay horseedi kartaa dhibaatadan.
Beeraleyda digaaga waa inay bartaan sababaha cudurada bisada, iyo sidoo kale tixgelin cudurada khatarta ah ee berriga.
Si aad arrintaan ula qabsato, waxaad u baahan tahay:
si loo abaabulo shimbiraha xayawaan ballaaran iyo guri digaag ah oo aan balaashadu faragelin karin midba midka kale;
in la abuuro shakhsiyaadka ugu dagaalamaya iyo in ay sii wadaan shimbiraha xooggan oo daciif ah mustaqbalka;
abuuro shuruudo raaxo leh ee berriga marka la eego heerkulka, qoyaanka, nalka, nalka iyo nadiifinta;
si ay ula socdaan baahida shimbiraha qiimaha nafaqada ee quudinta, bixinta qadarka loo baahan yahay borotiinka, kalsiyum, milix iyo fiber.
Marnaba ma aha in la iska indha-tiro dabeecadaha noocan ah ee baaskiilka, si aysan u keenin cawaaqib aad u daran. Waxaa fiican inaad qaaddid tallaabooyin ka hortag ah oo ka hortagaan dhacdooyinka noocan oo kale ah, taas oo ay lagama maarmaan tahay:
in la abaabulo hoyga nool ee shimbiraha iyada oo la tixgelinayo heerka ugu yar - hal mitir oo laba jibbaaran oo degaan ah oo aan ka badnayn 10 qof oo ilaa 1 bilood ah, ilaa 4 chicks oo da'doodu tahay 1-2 bilood iyo in ka badan laba shimbir oo da 'weyn;
waafaqsan dhammaan shuruudaha shuruudaha dayactirka iyo daryeelka shimbiraha;
haddii ay suurtogal tahay, samee iftiin cas u ah guriga, kaas oo ka niyadjabaya chicks ka soo cayayaanka si uu midba midka kale u riixo;
Ku dar cunto cunnada shimbiraha kala duwan ee borotiinka, oo ay ku jiraan saliidda kalluunka iyo cuntada lafaha;
Sida cabbir xagjirka ah, talooyinka beekhaamuhu waa la jajabin karaa chicks.
Bonemeal Sidaas, adigoo eegaya farsamooyinkan sahlan, waxaad ka hortagi kartaa dabeecadaha dagaalka ee hiddaha iyo xayawaankooda oo dhan ammaan iyo ammaan.
Akhri waxyaabaha ku saabsan nuucyada ugu caansan ugxan-yari: Dhulka carbuunta, Talyaaniga, Mamut, Linda, whitelia iyo Rhine.
Sida noocyada kale ee shimbiraha gudaha, bacaha u baahan daryeel iyo daryeel habboon, oo kaliya habka ugu habboon ee ganacsiga, nabadda iyo kala dambeynta ayaa lagu xukumi doonaa guriga.
Video: waxa la sameeyo haddii dhidigu uu bilaabo inuu isku xoqo midba midka kale